Thomas Tuchel Childhoodmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-elekọta bọl Thomas Tuchel Ụmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
Anyị Thomas Tuchel Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata, akụkọ mbido, ndị nne na nna, ezinụlọ, nwunye (Sisi), ụmụaka (Emma na Kim), Ndụ, Net Worth na Ndụ Nke Onwe.
Na nkenke, anyị na-enye gị akụkọ ihe mere eme nke German Football Coach onye na-ejikwa Chelsea FC. Lifebogger malitere Tuchel's Bio site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama na njikwa.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ otu n'ime ndị nkụzi Europe na-asọ mpi nke pụtara na ọkwa kachasị elu na afọ ndị na-adịbeghị anya.
Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akụkọ ndụ Thomas Tuchel, nke na-atọ ụtọ nke ukwuu. Ugbu a, n'enweghị ihe ọ bụla ọzọ, ka anyị malite.
Thomas Tuchel Childhoodmụaka Akụkọ - Ndụ Mmalite:
Maka ndị na-ebido Bio, ọ na-aza aha “Prọfesọ".
A mụrụ Thomas Tuchel na 29th nke August 1973 nne ya, Gabriele Tuchel (onye na-elekọta ụlọ) na nna, Rudolf Tuchel (onye na-ahụ maka football ezumike nká) na Krumbach, Bavaria, Germany.
N'okpuru bụ foto nne na nna Thomas Tuchel, ndị dị ka ha nọ na 70s.
Ndị nne na nna Thomas Tuchel - Rudolf na Gabriele Tuchel.
Maka Thomas Tuchel, inwe nne na nna hụrụ football n'anya mere ka ọ bụrụ ihe dị mma na egwuregwu ahụ ga-akụnye n'ime ya.
Tupu nwa ya nwoke abanye na njikwa football, Sir Rudolf Tuchel nwere ihe ọmụma dị ukwuu na egwuregwu.
Ị maara?… A na -akpọ Rudolf Tuchel ka ọ bụrụ onye nkuzi mbụ nwa ya nwoke Thomas na onye were ọrụ maka ịkụziri ya otu esi agba bọọlụ.
Thomas Tuchel nwere mmasị na football mbụ ya na Krumbach, obodo ya na West German.
Site n'enyemaka nke nna ya bụ onye na -enye ọzụzụ ntorobịa n'egwuregwu bọọlụ, Thomas Tuchel ji obi ya niile nabata mkpebi ahụ ka ọ bụrụ ọkachamara n'ịgba bọọlụ dịka nhọrọ ọrụ mbụ ya.
Thomas Tuchel tolitere n'uche agụmakwụkwọ. N'oge ahụ, ọ gara ụlọ akwụkwọ elementrị Krumbach.
A na-ahụ ebe nchekwa izizi nke agụmakwụkwọ ya na album uri nke enyi ụlọ akwụkwọ ya, Martin Bosch, si Krumbach.
Akụkọ banyere Ndụ Thomas Tuchel.
N'oge ahụ, obere Tuchel tụlere 28 kilogram na 1.40 mita n'ogo. Dabere na Augsburger-Allgemeine, Thomas Tuchel tinyere ụfọdụ akara na album uri mgbe ọ dị afọ itoolu.
Akụkọ banyere Thomas Tuchel - Ndụ Ndụ Mbụ:
Ịhụnanya Tuchel nwere maka bọọlụ hụrụ ya na 1979, na-edebanye aha n'akwụkwọ aha otu ndị ntorobịa obodo ya, TSV Krumbach. Ịgba egwu na ndị otu mpaghara ya, nke bụ onye nna ya na-arụrụ ọrụ, mere obere Tuchel nwa nwoke nwere afọ ojuju.
Thomas Tuchel Afọ Ndị Mbụ na TSV Krumbach.
Mgbe ọ banyere na klọb ahụ, Tuchel malitere ọrụ ya dị ka onye ọkpọ egwuregwu, ka n'okpuru nlekọta nna ya bụ onye ya na ya nwere ọtụtụ ọzụzụ.
Nke abụọ Ọrụ Nhọrọ:
Thomas Tuchel ka gara ụlọ akwụkwọ, ọbụlagodi mgbe ọ na-egwu bọl n'okpuru nlekọta nna ya. Laa azụ n'oge ahụ, onye dị afọ 9 nwere otu oge bu n'obi ịghọ "zọpụta helikopta pilot".
Thomas Tuchel's Childhood's Dreams - Nhọrọ nke abụọ. Ebe E Si Nweta Ausgurger.
Ịchọ ịghọ onye na-anya ụgbọ elu helikopta dị ka nhọrọ ndabere ọrụ ghọrọ ihe kpatara Tuchel ji gaa n'ihu na ọmụmụ ihe ya.
N'agbanyeghị usoro ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na-arụsi ọrụ ike, Tuchel ka nwetara oge iji gbaa bọọlụ asọmpi na ụlọ akwụkwọ sekọndrị Krumbacher nke o mechara gaa.
Ihe ncheta ya kacha mma ka bụ Nnukwu mmeri mmeri nke 1987, asọmpi nke mere na Stadium Olympic nke Berlin.
Thomas Tuchel Successga nke Ọma Ọrụ - Na-eguzo na azụ aka nri. Ebe E Si Nweta Augsburger-Allgemeine.
Ịga n'ihu na-enwe ọganihu na ọrụ bọl ya na-ahụ Tuchel mgbe e mesịrị imebi ihe omumu ya n'ozuzu oru ya.
Akụkọ banyere Thomas Tuchel - Akụkọ banyere Ọmarịcha Akụkọ:
Tuchel weere usoro nke ọ bụla n'ime afọ 1988, otu afọ, ọ na - enwe ihe ịga nke ọma FC Augsburg agụmakwụkwọ. Oge mmalite ya na ụlọ ịgba chaa chaa dị ka ndị ịgba ụkwụ na-ahụ ka a na-ewere ya dịka talent.
Rodrigo Bentancur Child Akụkọ gbakwunyere Eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Thomas Tuchel afọ mgba na FC Augsburg.
Mgbe Ndị Na - aga Ahụhụ:
Ka oge na-aga, ihe malitere ịdị njọ maka Tuchel. Ọ Ọ dịghị mgbe ọ pụtara maka otu egwuregwu mbụ na arụmọrụ na-ekwekọghị ekwekọ mere ka ọ hụ ụbọchị ya ka a na-agụta na klọb.
N'oge ọ tụgharịrị 19, afọ nke ọ chere na ọ gụsịrị akwụkwọ na ntụgharị ya ka ọ bụrụ onye egwuregwu bọọlụ tozuru etozu, a tọhapụrụ Thomas Tuchel na klọb ahụ.
Ọ bụ ọdachi nye Thomas Tuchel na ezinụlọ ya. N'afọ ahụ 1992 hụrụ na Tuchel dara Olileanya nke iji FC Augsburg dị ka ọrụ mmiri.
Mkpebi na nkwenye onwe onye bụ okwu nche ya n'oge ihe mgbu na mmerụ ahụ na mwepụta ya na egwuregwu ahụ.
Otú ọ dị, Tuchel kwagara na klọb German ọzọ, Stuttgarter Kickers onye nyere ya oge ọ na-atụ anya ka ọ bụrụ okenye.
Ihe Mgbaghara Ọzọ:
Ọnụnọ Tuchel na Stuttgarter Kickers bụ usoro ihe ngosi na -enweghị isi. N'ịgbaso oge 1993 - 94 nke na -akụda mmụọ karị, klọb ahụ kwụsịrị na ya wee kpebie ịhapụ ya.
Tuchel weghachiri na-esochi ntọhapụ ya nke abụọ. Ọ gara ọnwụnwa wee nwetaghachi onwe ya site n'aka ụlọ ọrụ ọzọ, SSV Ulm. Obi na-enye obi ụtọ na Tuchel mechara hụ na ọ na-agbake na ogologo oge.
Thomas Tuchel Ndụ Ọrụ Ndụ.
Ọ ghọrọ isi ihe maka ụlọ ọrụ ahụ na afọ anọ ya tupu ọdachi ọzọ amalite ọzọ.
Nhụjuanya ndị ọzọ na-eweghachi azụ:
Ka oge na-aga mgbe ị na-egwu maka SSV Ulm, Tuchel nwetara ihe ọzọ na ọrụ ya, oge a abụghị ọrụ ya, mana arụ ọrụ cartilage.
Mgbalị Tuchel mere iji nwetaghachi onwe ya bụ ihe efu. Enweghi ike ịgbake site na mmerụ ahụ dugara ya n'ịmanye ọrụ ike ya na njedebe na mberede mgbe ọ dị afọ 25. Nke a pụtara na ọ nọrọ naanị afọ 5 n'ịgba bọọlụ ọkachamara.
"Nrọ nke ndụ m niile na mberede apụ,"
Tuchel kpugheere ya n'otu mkparịta ụka.
Akụkọ banyere Thomas Tuchel - Bilie na Akụkọ Ama:
Ndụ Mgbe Ya Nrọ Nrọ:
Thomas Tuchel ekweghị ka mmerụ ahụ ya nweta akụkụ ọ bụla. Mgbe ọ na-elekọta mmerụ ahụ, ọ malitere ịmụ akụ na ụba na football. N’agbata afọ ọjọọ nke 1998 rue 2000, Tuchel bidokwara nara nkuzi.
N'ịkụ aka nke puku afọ ọhụrụ ahụ, Tuchel chere na ọ bụ oge itinye akwụkwọ nchịkwa ya n'ọrụ. Ngwa ya ka ọ bụrụ onye nkuzi ntorobịa gara nke ọma na klọb German, VfB Stuttgart.
Dị ka onye nkụzi football, dị ka nna ya, Thomas nyeere ọtụtụ ụmụaka aka ka ha tolite, na-ejide ọnọdụ onye nkụzi ntorobịa maka afọ ise.
Ị maara?… Ọ bụ ya kpatara mmepe nke ndị egwuregwu egwuregwu otu egwuregwu n'ọdịnihu, ya bụ Mario Gómez na Sami Khedira.
Tuchel's A-Juniors nke VfB Stuttgart - gụnyere Sami Khedira (ahịrị elu, 2nd site n'aka ekpe). Ebe E Si Nweta Egwuregwu.
Na 2005, onye nkuzi bọọlụ laghachiri Augsburg, klọb ochie ya nke chụpụrụ ya n'otu oge. N'ịchọ iwepụ ihe ọjọọ, njikwa klọb ahụ kpebiri ime ya onye nhazi otu ntorobịa ha.
Mgbe ọ jisịrị ọkwa ahụ afọ atọ, e mesịrị họpụta ya dị ka onye njikwa egwuregwu mbụ nke ụlọ ọgbakọ na Augsburg II ebe ọ nọrọ otu afọ tupu ama ama ya na Mainz.
Anthony Gordon Child Story gbakwunyere Eziokwu akụkọ ndụ na-adịghị agwụ agwụ
Na Mainz 05 Tuchel meriri Rheinhessen A-Junior Championship.
Thomas Tuchel na-eme ememme Rheinhessen A-Junior Championship.
Ihe ịma aka nke na-akwado Mainz dịka ụlọ ọrụ Bundesliga ọhụrụ a kwadoro bụ ihe siri ike n'ihi eziokwu ahụ bụ na Tuchel ketara otu òtù ndị na-enweghị atụ nke kwadoro maka football elu. N'ikwu nke a, e nyere ya ego ole na ole iji nọrọ.
Jay-Jay Okocha Nwatakiri Akụkọ nke Gbasara Eziokwu
Tuchel gara n'ihu were Mainz, ụlọ ọrụ ya na-enweghị ike ịkụ Bayern Munich na Allianz Arena. O nyere ha oge kachasị mma ha bidoro n'otu oge na nke ise nke Bundesliga, nke kachasị elu n'akụkọ ihe mere eme ya.
Ọrụ Tuchel na Mainz jidere anya nke klọb ndị dị na Europe. A hoputara ya ka o buru nnoo choro iji dochie anya obi oma Jürgen Klopp.
Enwetara otu nnweta ya site na Dortmund otu olu ka ọ na -awụlikwa elu n'ọrụ. Mgbe Dortmund nọ, Tuchel duuru ndị otu ya merie iko Garman.
Thomas Tuchel, onye mmeri nke German Cup na Borussia Dortmund.
Mgbe Dortmund nọ na-akpọ Tuchel maka na ọ na-elekwasị anya na mmepe ọkpụkpọ. Onye ntorobịa a zụlitere na-eto eto nwetara Ousmane Dembele na Christian Pulisic ibu kpakpando ha aburula.
Usoro Tuchel ghọrọ ihe adrenaline gbara onye isi oche PSG Nasser Al-Khelaifi onye na May 2018 wetara ya ka ọ nọchie Unai Emery. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Mmekọrịta Ndụ na Sissi Tuchel:
N'azụ onye njikwa na-aga nke ọma, e nwere nnukwu nwanyị dị ka onye ahụ mara mma nke Sissi bụ onye bụbu onye ọrụ nke ụlọ obibi akwụkwọ.
Jarrad Branthwaite Akụkọ nwata gbakwunyere Eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Nwunye Thomas Tuchel - Sissi Tuchel.
Sissi na di ya Thomas Tuchel lụrụla kemgbe May 2009 n'oge ya na Mainz 05. Ha niile nwere ụmụ nwanyị abụọ; Emma na Kim bụ ndị a mụrụ otu afọ iche.
Tumụaka Thomas Tuchel.
Ma Sissi na Tuchel anaghị eme ihu ọha. Naanị ha na-aga asọmpi tennis dị ka nke Paris-Bercy na mmemme ụbọchị ọmụmụ nke ndị egwuregwu bọọlụ nọ ha nso.
Mata ụdị ndụ Thomas Tuchel nwere ga-enyere gị aka ịmatakwu ya. Dabere na Augsburger akụkọ, Thomas Tuchel kọwara dị ka "otu obiOnye nwere mgbe ụfọdụoke ike".
Ọzọkwa n'ụdị ya, Thomas Tuchel bụ nwoke nwere oke ihu ọha yana ọkachamara n'inwe onwe ya ụkọ n'oge ezumike.
Ọ na-eji nzube na-echebe ndụ onwe ya. Ọbụna nwunye ya na ndị mụrụ ya na-ezere ajụjụ ọnụ ma ọ bụ ịza ajụjụ n'ihu ọha.
Tuchel bụ onye na-aṅa ntị na nkọwa kacha nta ma nwee usoro usoro ndụ miri emi, nke na-eme ka ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla fọdụrụnụ.
Eziokwu Ezinụlọ Thomas Tuchel:
Inwe usoro nkwado ezinụlọ siri ike na -akwalite ntụkwasị obi na ịga nke ọma n'egwuregwu. Nke a bụ ihe ezinụlọ Thomas Tuchel nyere ya. Ọ malitere site na oge Rudolf Tuchel nyere nwa ya nwoke aka ịchọpụta nka na nka ya.
Ndị nne na nna Thomas Tuchel ka bi na Krumbach obodo German ha nwere ihe karịrị ndị bi na 13,000.
N'ebe ahụ a na-akọ ugbo, otu obodo jupụtara n'oké ọhịa, ubi, na ala ahịhịa. Ezinụlọ Tuchel ekpebiela ịkpụpụta niche bọọlụ.
Akụkọ nwata Harvey Elliott gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Ezinụlọ Thomas Tuchel na mgbọrọgwụ:
Ọ ga-ekwe omume na Rudolf Tuchel ga-abụrịrị onye so na ndị nkuzi nkuzi bọọlụ dị ole na ole na Krumbach. Nke a na-egosi na a ga-akwụ ya ụgwọ nke ọma n'oge ya ma eleghị anya ọ na-arụ ọrụ n'ụlọ dị mma.
Ị maara?… Na Krumbach, enwere oke ndị Juu bi na nke Bavaria. Site na itinye ya, ọ ga - ekwe omume na Thomas Tuchel sitere na ezinụlọ ndị Juu.
Ụdị ndụ Thomas Tuchel:
Site n'aka nwa okoro ya na-egbu mgbu, Tuchel abughi ụdị mmadụ nke na-ebi ụdị ndụ a na-adịghị ahụ anya site na njedebe nke ụgbọala mara mma, swagger, booze, na nnukwu ụlọ.
N'agbanyeghị na Borussia Dortmund & Mainz 7 na-enweta akụ na ụba nde dollar 05, ma nwee ego ruru nde Euro 7 ugbu a, onye nkuzi a mụrụ German na-ebi ndụ obi umeala. Ndụ mmekọrịta ya dị ka emechiri maka ụwa dị n'èzí
Thomas Tuchel Eziokwu Eziokwu:
Ịbụ onye njikwa bọọlụ ga -abụrịrị ọkụ mmụọ. Tuchel na-eche mgbe ụfọdụ nchekasị nke ịzụlite/ilekọta ụmụaka na-eto eto nke oge a.
Dị ka a na -ahụ site na vidiyo dị n'okpuru, ihe mmetụ mkpịsị aka ya bụ isi ihe ọchị na egwuregwu bọọlụ mara mma.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akụkọ akụkọ nwata anyị Thomas Tuchel gbakwunyere Eziokwu Untold Biography.
Akụkọ nwata Sofiane Boufal gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Akụkọ nwata Ricardo Pepi gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Michael Estrada Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Akụkọ Na-adịghị Anya
Akụkọ nwata Christopher Nkunku gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-adịghị ekwu okwu
Anyị na-echetara gị ozi ọma. Elles achọghị ịma ma ị nwere.
Nwere ike 17, 2022